Tilmaamaha Shuruppak, qoraal Sumerian ah oo loo tixgelinayo inuu yahay kan ka horreeya 10 amarradiisa - Afrikhepri Fondation
Sabti, Oktoobar 31, 2020
LTilmaamaha Shuruppak waxay ka mid yihiin shaqooyinka suugaaneed ee ugu da'da weyn ee la yaqaan, maaddaama noocyadii ugu da'da weynaa ee la helay ay ku qoran yihiin kiniinno jajab ah oo la soo saaray oo taariikhdu ahayd 2500 BC. AD qiyaastii. Qoraalku wuxuu la mid yahay Tobanka Amar ee axdigii ugu horreeyay ee kitaabiga ah, iyo waxyaabo kale, tilmaam u ah ixtiraamka filial (sadarka 255-260), xatooyada (sadarrada 28-31), kufsiga (khadadka 61-62) iyo dilka (khadadka 252- 253) Duulaankii Intaa waxaa dheer, waxay muujineysaa sida saxda ah ee loo maareeyo loona abaabulo boqortooyo, iyada oo la siinayo tilmaamo ku saabsan addoomada (khadadka 28-31, 49,154-164, 193-201) iyo arrimaha bulshada. Wicitaanka wiilka waa mid soo noqnoqda, oo dib loo xasuusto qoraallada maahmaahyada kitaabiga ah.
Tilmaamaha Shuruppak waa kan ugu da'da yar ee qoraallada xigmadda, oo ku sifoobaya habdhaqan anshax. Qoraalku wuxuu ku andacooday inuu lahadlayo taliyihii Shuruppak wiilkiisa, Ziusudra geesiga sheekada daadka kaasoo, sida Nuux, ka badbaaday burburka aadanaha oo noqday kan ugu jecel ilaahyada.
Waa kuwan tilmaamaha Shuruppak:
Haddii boqor ixtiraamo sharciga waddankiisa, Ea, oo ah boqorka masiirka, ayaa beddeli doona aayihiisa mana joojin doono inuu ku eryanaado isaga iyo cadownimadiisa.
Haddii nin naagtiisa nin kale laga qaado, way xidhi doonaan oo biyaha ku dhex tuuri doonaan.
Wixii nin u wanaagsan wuxuu ku noqon karaa dembi ilaahiis, wixii la quudhsado xagga nin xukunkiisuna wuxuu ku farxaa ilaah! Ayaa garan kara doonista ilaahyada jannada ku jira? Ayaa garanaya ujeedka ilaaha moolalka?
Hooyo weligeed wiil umushay iyadoo aan dembi lahayn. Xitaa kii dadaal badan isku dayaa ma guuleysto: tan iyo wakhtiyadii hore weligiis lama arag shaqaale aan iin lahayn.
Jiirka jiidashada ee hadhuudhka beeraha ayaa ka dhigaya mid xiiso leh gogol daaqada ka soo baxaya midhaha beerta.
Wren, oo ku dul degaya maroodiga, ayaa ku yidhi: “Saaxiib, Ayya waa caawintaada. Goobta waraabinta waxay kaa siin doontaa biyo aad cabto. "Maroodiguna wuxuu ugu jawaabayaa wrenka:" Maan arag inaad adigu igu soo degtay. Maxaad fara gelin ku haysaa? Adiguna maan arag inaad ka duuleyso sidoo kale. "
Jiir ka cararaya mongose ​​ayaa soo galay godka abeesada wuxuuna ku yidhi, “Maska jilibiyaha ayaa i soo diray; Nabadeey!
Doofaarku waa edeb daran yahay ... Wuxuu buufiyayaa dabada, wuxuu ka dhigayaa dariiqyada uraya, carrada guryaha ka dhigaya Hilibka doofaarku meel kuma laha macbudyo; isagu ma ahan nin caqli badan loomana ogola inuu ku tunto dhagaxa weyn. Isagu waa karaahiyo ilaaha oo dhan; salaantiisu waxay cay ku tahay Shamash.
Haddii boqorku lacag ka qaato Baabuloon, oo uu addoonkiisa bikraddiisa kor u qaado, amase haddii xaakinnadu yihiin seefta uu boqorka Baabuloon u raaco, Rabbiga ugu roonow xaakinnada samada iyo keruubiimta. oo dhulkuna midhihiisuu soo bandhigi doonaa, oo wuxuu ka dhigi doonaa mid qayb la hela maalkiisa iyo baayacmushtarka.
Haddii muwaadiniinta Nippur waxaa hor keenay boqorkii la xukumi lahaa iyo in, goortuu in laaluush helay, ayuu caddaaladdarro ku xukumay, Enlil, sayidkaygiiyow, ee dalka, soo dejin doonaa isaga ka gees ah ciidan shisheeye in ay xasuuq oo ciidankiisa, si ay amiirradiisii ​​iyo saraakiishii warwareegaan jidadka maadaama ay waratadu.
Haddii boqorka dulmiyo xukumi muwaadin Sippar, iyadoo bixisa qariib ah, Shamash, garsoore samada iyo dhulka, oo uu dalka u soo jiidi doonaa maxkamad shisheeye, si ay amiirradii iyo xaakinno aan loo qaadan karin galay caddaaladda.
Haddii boqorku iska indho-tirayo sharciga, dadkiisa waxay ku dhici doonaan fowdo, waddankuna wuu burburin doonaa.
Naagtaada aad jeceshahay, ha furin qalbigaaga: sida ugu dhakhsaha badan ee ay gacanta ku hayso gacmeed, waxaad arki doontaa cilladda ku jirta kaydkaaga. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxa ku jira, in xaaskaaga aysan wax baran.
Wiilkaygiiyow, oo caydu wax ka cunto bur, Ha dulleynin dhalinyarada iyo odayaasha. Ha ku maadsan ilaaha aanad baryin. Talo ka soo qaad xooggaaga: Mid xoog badan ha isku qiyaasin.
Ha udhigin cabaretka, wiilkaygiiyow: cun cun, taas oo caloosha ku ridaysa. Maaha mid haboon, wiilkaygiiyow, dadkani waa dad badan: waad gaajoon doontaan oo dhadhamin kartaa cabitaankaaga.
Maalintii rag aad u tiro badani ay heleen qaybtoodii, saamigii aniga igu dhacay ayaa mudan ...
Kuwa sharka lahu waxay quudhsadaan erayada afkiisa, Oo isagu wuxuu ka xanaajiyaa meesha quduuska ah, Oo wuxuu u cadhoon doonaa kii ceeb sameeya. Anigoo ah ninka caqliga leh, maxaan ugu biirayaa dhallinyarada jaahilnimada ah? Aniguse, kuwa xigmadda leh, bal maxay iigula macaamilootaa? Had iyo goor baa jirta kibis, laakiinse kibistayda waa la gooyaa.
Haddaad ilaaha ka soo celiso lacagtii dhaarta, oo aad ka cabsato ilaaha dhaarta oo aad dhawrto jidhkaaga oo ku qariya webiga dhinaciisa, wiil walubana waa laga qaadayaa, afadiisuna mar dambe ilmo ma dhali doono.
Qofka aan ku faanin magaca aabihiis iyo kan hooyadiis, Shamash yaanu mar dambe u nuuran, waayo waa nin xun.
Un léopard rencontra une chèvre qui avait froid. Le léopard dit à la chèvre : « Viens, que je te couvre de ma pelisse ! » La chèvre répondit au léopard : « Pourquoi ferais-je cela, messire ? Ne m’enlève pas ma propre peau ! » Comme on dit : « Il ne salue la gazelle que pour sucer son sang ! »
Waxaan sitay caws waxaanan kiciyey buur, laakiin isagu wax aan ka fududayn ma jiro qof aan wadan lahayn!
Waxaan soo jiiday ciid waxaanan kor u qaaday cusbo, laakiin wax culeys ah kama lihi deynta!
Boqorka carrabkiisu wuu macaan yahay, laakiin wuxuu jabiyaa feedhaha masduulaagii. Waxay la mid tahay geeri oo aan la arki karin.
Xitaa waxaan dhadhamiyay medlar qadhaadh oo waxaan cunay geedo, laakiin ma jiraan wax qadhaadh oo ka liita saboolnimada!
Adoo wajahaya arin adag, ha ka hor imaan boqorka. Cadhadiisu way ka dheereysaa hillaaca: iska jir! Yaanu iyada dab kaaga dhigin erayadaada, Waaba intaasoo aad waqtigaaga ka hor gudubto.
Wiilkaygow, ha u sheegin wax kasta oo maskaxdaada ku soo dhaca, waayo meel walba waxaa ka jira indho iyo dhego. Iska ilaali afkaaga, waaba intaas oo ay kaa dhigtaa inaad ku fashilanto. Iskusoo wada duuboo, afkaaga ilaali, iyo wixii aad maqashayba, digtoonow; Waayo, eraygu waa shimbir, oo kii sii daayaa waa nacas.
Wiilkaygiiyow, ha habaarin maalinta aad aragto habeenka.
Waxaa jira laba waxyaalood oo wanaagsan oo mid saddexaad ah oo ka farxiya Shaamash: in, khamri cabbidda, mid ka mid ah la wadaago, in xigmad la helo, mid iyada la mid ah, in maqal eray aan la muujin. maahan. Tani waa qaali Shamash horteeda. Laakiin kan cabba khamriga isaga oo aan la wadaagin, kan caqligiisuna uu sii ahaado mid aan waxtar lahayn oo ku hadla, ayaa daawada iyaga?
Waayo, addoonku caqli wuu leeyahay. Waayo, addoonku caqli buu leeyahay, iyo addoommadaada, iyo edbinta.
Ha u tudhin wiilkaaga usha, haddii kale ma awoodid inaad ka badbaadiso shar. Haddaan ku dhufto, wiilkayga, ma dhiman doontid, laakiin haddaan qalbigaaga kaaga tago, ma noolaan doontid.
Wiilkii wax baray oo wax baray oo caqabad ku noqonaya nolosha.
Maxaa ka xoog badan dameerka bareega ah?
Dhambaal seddexleh ah si degdeg ah uma jebin.
Xadhig saddexlaha ah ayaa la gooyaa.
Dareemo degdeg ah, eygu wuxuu dhashay dhalashada indhoolayaasha.
Eeygu, dharbaaxo degdeg ah, wuxuu dhaley ilmo soo ridid.
Eygii u galay foornada dheryasameeyaha si uu isu kululeeyo, mar haduu kululaaday, wuxuu u istaagay inuu ku ciyo.
Eyga dheryasameeyaha markuu digaaga galay, waa dheryasameeyaha dabadiisa inuu ciyo.
Halka uu libaaxu cuno nin, qofna mar kale wuu dhaafaa.
Un renard urinait dans la mer: « Mon urine remplit toute la mer » dit-il.
Ninkii libaaxa dabada qabtay wabiga ayuu ku dhacay; cid kasta oo dawacada dabadeeda qabata way baxsatay.
Markay sayidaddeedii guriga ka baxdo, oo addoonkuna uu dibadda ka yimaado, midiidinku wuxuu fadhiistaa diyaafaddeeda, oo sayidaddeedii oo aan lahayn.
Cudur ku dhaca dhakhtar la’aan wuxuu la mid yahay qof gaajaysan oo hadhay oo aan kibis lahayn.
Saaxiibtinimadu waxay socotaa maalin. Xidhiidhka ganacsi weli wuu socdaa.
Dadka aan boqorka lahayn waa sida adhi oo kale oo aan adhijir lahayn.
Ma aha hantidaada waxa ku caawinaya ee waa ilaahaaga.
Dhagaxa weyn ayaa ku dul sabbeeya wabiga ninka wanaagsan.
Qaddarku wuxuu u eg yahay bangi qoyan: ninka, marar badan, cagtuu ka siibtaa.
S’agissant de pain pour autrui, il est aisé de dire : « Je t’en donnerai », mais le donner est une autre affaire.
Ha u seexan adoo addoontaada ah: waayo, iyadu waxay igu tirisay in ilko faro badan leh.
Ha u ogolaan naftaada ciyaar kasta oo leh haweeney da 'yar oo guursaday: sheekooyinka waa kuwo aan kala go'a lahayn.
Guri ha u jebin ... Tuuggu waa libaax; mar la qaado, waa addoon.
Ha u tagin meesha ay ku murmaan, muranku markhaati buu kaa noqon lahaa!
Guri ha ku dhisin barxadda: waxaa jooga dad badan!
Beer ha dhigin jidkaaga: waa masiibo.
Ha iibin dameer daanyeer ah oo qaylinaya, haddii kale isagu wuu kugu qaylin doonaa.
La soco Kormeer (2009)
Ilaali Qurux oo i dil
Lasoco Muuqaalka Guusha (2015)
Daawo Amaanka Feejignaan, waddada xorriyadda (2006)